म्यानपावर कम्पनी बिरुद्ध उजुरी दिए सुनुवाई हुन्छ त ?
Sun, Aug 09, 2020 | 23:20:48 NST
विक्रम अर्पण/ पाँचथर
प्रश्न : केही समय अगाडी नेपाल सरकार र म्यानपावरबिच भएको मलेसिया लगायत खाडी राष्ट्रमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको सम्झौता केवल सम्झौतामै सिमितभएको देखिन्छ । जबकी त्यो भन्दा अगाडी जति पैसा म्यानपावरमा तिरिन्थ्यो अहिलेको अवस्था पनि जस्ताको त्यस्तै छ । म आफै पनि कुवेतको भिसाको प्रतिक्षामा छु । डेढलाख लगानी गर्नु पर्छ भनेर म्यानपावर कम्पनीले भनीराखेको छ । फ्रिभिसा फ्रिटिकटको नियम लागु भैसकेपछि पनि किन यत्रो लगानी भनेर सोध्दा लागु भई नसकेको र परिक्षणमा रहेको भनेर जवाफ दिन्छन । सरकारले किन त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई कार्वाही गर्न सक्दैन ? यसरी हामी ठगिएमा हामी कहाँजाने ? के हाम्रो उजुरीको सुनुवाई हुन्छ त ?
प्रश्न : गोविन्द मणी भुर्तेल, प्रवक्ता, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - यो निति कार्यान्वयन भइ सकेको छ । अर्को निति लागु नभएसम्म यो नितिनै कायम रहन्छ । यदी कुनै म्यानपावरले एक लाख वा डेढ लाख रकम माग्छ भने तुरुन्त वैदेशिक रोजगार बिभागमा प्रमाण सहित उजुरी गर्न जरुरी छ । तपाईंहरुको उजुरीको सुनुवाई अवश्य हुन्छ ।